ငါတက္ကသိုလ်, ငါ၏အဓိကပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်ဘွဲ့ရကျောင်းသွားချင်တယ်။ တက္ကသိုလ်အကြှနျုပျ၏အဓိကဂျပန်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ဘောဂဗေဒတစ်ဘွဲ့ရကျောင်းကရရှိထားပြီး, ရိုက်ထည့်ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ပါသလော
သင်တစ်ဦးကတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရကြပြီတဲ့ဘွဲ့ရကျောင်းတွင်စီကျောင်းသားလေ့လာမှုများနှင့်တစ်ဦး professor.It ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာတစ်ဦးချင်းစီသူ / သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်သုတေသီသောအခါ, အမှတ်တမဲ့တစ်ခုသာဘွဲ့ရကျောင်းသွားဖို့စဉ်းစားရန်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏။ ထိုဘွဲ့ရကျောင်းတွင်လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာလယ်ပြင်၌သိကျွမ်းခြင်းပညာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ သင်တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ဘောဂဗေဒအတွက်သင်တန်းကိုယူကြပြီဆိုပါကသငျသညျဟုမေးပါလိမ့်မည်။ တချို့ကဘွဲ့ရကျောင်းများအထူးသဖြင့်ဘာသာရပ်များအတွက်ခရက်ဒစ်၏ဝယ်ယူတစ်ဦးစံထားကြ၏။
ဒါဟာဂျပန်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ N1 အဆင့်ကိုသွားလိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်စာရင်းသွင်းပြီးနောက်ဘွဲ့ရကျောင်းတွင်သင်တို့၏ဂျပန်တိုးတက်လာဖို့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေသံသယဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲအသီးအသီးဘွဲ့ရကျောင်းခြားနားသည်။ (ဂျပန်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏) ကိုအထူးပြုဘာသာရပ်အတွက်စာမေးပွဲနှင့်အင်တာဗျူး obligatory ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ဂျပန်, အင်္ဂလိပ်နှင့်တင်ပြချက်များအတွက်ဆောင်းပါးအတိုအပိုင်းအစရေးသားခြင်းဂျပန်စာကျွမ်းကျင်မှုများ၏စာမေးပွဲအချို့သည်ဘွဲ့ရစာသင်ကျောင်းများအတွက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ပထမဦးစွာသင်လေ့လာချင်တဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုရှင်းလင်းစေ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပါမောက္ခနှင့်သင်၏တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရမေးမြန်းဖို့ကောင်းတစ်ဦးစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်၌သင်တို့၏သုတေသနပြုချက်အစီအစဉ်ကိုရေးသားအသုံးဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်မှန်လျှင်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားလည်းအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဘွဲ့ရကျောင်းကရိုက်ထည့်ရန်, အင်္ဂလိပ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ fluency ဖြစ်သနည်း
တချို့ကဘွဲ့ရကျောင်းများတချို့ကကျောင်းများ TOEFL ရလဒ်များ၏တင်သွင်းခဲ့တဲ့လိုအပ် (ထိုမေးခွန်းများကို Japanese သို့အအထူးပြုလယ်အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးဘာသာပြန်ဆိုအားအလွန်များပါတယ်။ ) အင်္ဂလိပ်စာမေးပွဲလိုအပ်သည်။ တချို့ကကျောင်းများတွင်အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်မမေးကြဘူး။ ဂျပန်အတွက်ဘွဲ့ရကျောင်းများမှာများစွာသောပါမောက္ခအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများတွင်ဒီဂရီယူကြပြီ။ ဖတ်ရှုဖို့အတော်များများဆောင်းပါးများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတစ်ဦး command ကိုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ငါသည်တကောလိပ် / အထူးပြုကျောင်းတွင် (3 နှစ်အရွယ်သင်တန်း) မှဘွဲ့ရကြပြီ။ ယခုတွင်ငါသည်တစ်ဘွဲ့ရကျောင်းတွင်ဝင်ရောက်နိုင်သလား?
ဂျပန်အတွက်ဘွဲ့ရကျောင်းတွင်ဝင်ရောက်ဖို့, ကထက်ပိုမို 16 လေ့လာမှုနှစ်သို့မဟုတ်ညီမျှပြီးဆုံးပါပြီရန်လိုအပ်ပါသည်။ မကြာသေးမီက ပို. ပို. ကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသူတို့ Academic နိုင်စွမ်းစဉ်းစားနေကြပါတယ်ထောက်ပံ့ဝန်ခံ။ တချို့ကအစိုးရ-run တက္ကသိုလ်တွေကိုမကြာခဏသုတေသနကျောင်းသား (kenkyuusei) အဖြစ်ရုံးတင်စစ်ဆေး၏တစ်နှစ်ပြီးသွားပြီးနောက်ကျောင်းကဘွဲ့ရကျောင်းသားတွေကိုဝန်ခံ။
ယေဘုယျအားဖြင့်သူကစကားပြောကြောင်းအမှု၌ခက်ခဲသည်။ သင့်အနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီဘွဲ့ရကျောင်းကမေးမြန်းဖို့ပိုကောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အရေးအပါဆုံးအရာလျှောက်ထားသူအဓိက၏လုံလောက်တဲ့အသိပညာအရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အ EJU (နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအဘို့အဂျပန်တက္ကသိုလ်ကဝင်ခွင့်များအတွက်စာမေးပွဲ) ကိုယူဖို့ကလိုအပ်သနည်း
ပုံမှန်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများ, သုတေသနလုပ်ငန်းကျောင်းသားများကို (kenkyuusei) အကြားနှင့်စာရင်းစစ် (Kamokutou Rishuusei) အသိအမှတ်ပြုကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
တစ်ဦးကအသိအမှတ်ပြုစာရင်းစစ်တစ်ဦးဒီဂရီရှာဖွေလျက်မပါဘဲအချို့သောဘာသာရပ်များလေ့လာနေလျက်, ပါမောက္ခ၏ရုံးခန်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းမှပိုင်ပါဘူး။ တစ်ဦးကသုတေသနလုပ်ငန်းကျောင်းသား (kenkyu SEI) ကိုပါမောက္ခနှင့်သူ၏ဝန်ထမ်းများကနေဖြင့်အကြံပေးခံရဖို့ သာ. ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းရှိခြင်းပါမောက္ခ၏ရုံးခန်း / ဓာတ်ခွဲခန်းပိုငျဆိုငျ။ သင်တစ်ဦးသခင်၏အစီအစဉ်မှတိုးရန်အစီအစဉ်ရှိပါက, သင်ပါမောက္ခ၏ရုံးခန်း / ဓာတ်ခွဲခန်းမှပိုင် သာ. ကောင်း၏ရှိခဲ့ပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်နှစ်ခုအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။ အပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘွဲ့ရကျောင်းတွင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလယ်အတွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အဆင့်မြင့်ထွန်းကားစေရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောဘွဲ့ရကျောင်းများဒါကြောင့်အပေါ် MBA သင်တန်း (Business Administration ၏မဟာ), မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် (ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှု၏မဟာ), MMT (နည်းပညာစီမံခန့်ခွဲမှု၏မဟာ), MPH (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမဟာ) နှင့်ပါဝင်သည်။